डेट्रोइट छत सेवा
नेशविल तमिलनाडु छत ठेकेदार
प्रकाशित भएको थियो सेप्टेम्बर 23, 2016अक्टोबर 5, 2016 द्वारा Cacilia chase	एक वृद्ध छत लागि सहि प्रतिस्थापन छनौट – वा नयाँ भवन लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प पहिचान – कुनै सजिलो काम छ. एक भवन लागि सिद्ध छत समाधान बस सडक तल अर्को लागि सबैभन्दा खराब विकल्प हुन सक्छ. कुनै दुई भवन ठीक उस्तै हो किनभने त्यो हो, तिनीहरूले नजिकबाट प्रत्येक अन्य जस्तै भने पनि. त्यसैले, तपाईंले नयाँ छत कसरी चयन गर्छन्, को बजार मा सबै विकल्प दिइएको? तपाईं प्रश्नहरु को एक श्रृंखला सोधेर द्वारा सुरु गर्न सक्नुहुन्छ, पहिले तपाईं छत चयन, छत ठेकेदार वा निर्माता.
वारेन छत,पाटन आननअर्बोर,आननअर्बोर छत,डेट्रोइट नवीकरण,मिशिगन मा पाटन कम्पनीहरु,रोजभिले छत,डेट्रोइट roofers,कालामाजो छत,Lansing छत,मेट्रो डेट्रोइट छत,छत मर्मत आननअर्बोर,पाटन डेट्रोइट,पाटन मिशिगन,डेट्रोइट छत,मिशिगन छत,पाटन कम्पनीहरु मिशिगन,मिशिगन मा पाटन जब,Auburn छाना ठेकेदार,चकमक छत,मिशिगन छत कोड,छत मर्मत डेट्रोइट,मिशिगन मा छत ठेकेदार,मिशिगन मा सबै भन्दा राम्रो छत कम्पनी,मिशिगन मा व्यावसायिक छत कम्पनीहरु,व्यावसायिक छत मिशिगन,मिशिगन छत कम्पनीहरु,मिशिगन छत ठेकेदार,मिशिगन मा roofers,छत ठेकेदार मिशिगन,मिशिगन मा छत,क्रिश्चियन डेट्रोइट छत,डियरबोर्न छत,डेट्रोइट घर सुधार,डेट्रोइट छत मर्मत,डेट्रोइट छत कम्पनीहरु,डेट्रोइट छत कम्पनी,मिशिगन roofers,पोर्टयुरोन छत,मिशिगन मा छत कम्पनीहरु,पाटन कम्पनी मिशिगन,छत ठेकेदार डेट्रोइट
1. यो भवन गरेको मिशन बयान के हो?
कल गरिएका अघि डेट्रोइट छत सेवा, यो भवन सम्बन्धित रूपमा ठेगानामा पहिलो वस्तु कम्पनीको मिशन बयान छ.
तपाईं सकेसम्म भवन बारेमा धेरै र यसको भविष्य जान्नु आवश्यक छ.
छत कम्पनी योजना अर्को लागि आफ्नो अचल सम्पत्ति सम्पत्ति भागको रूपमा यो भवन राख्न गर्छ 10 गर्न 20 वर्ष? त्यहाँ निकट भविष्यमा यसलाई विस्तार गर्न कुनै पनि योजना हो, वा यसको प्रयोग परिवर्तन गर्न? यसको वर्तमान र भविष्य कब्जा के-के हुन्, इन्सुलेशन आवश्यकताहरू, सौंदर्य प्राथमिकता र छत उपकरण लागि पनि मर्मतसम्भार कार्यक्रम?
लागि प्रयोग गर्न जाँदै छ के भवन तपाईंको प्रश्न सुरु.
जस्तै, थप कम्पनीहरु सञ्चालन तिर सार्न रूपमा 24 घण्टा दैनिक, सात दिन वैश्विक ग्राहकहरु पूरा गर्न एक हप्ताको, डाटा सेन्टर छत लिक कहिल्यै वसन्त हुनुपर्छ. कम्प्युटर सिस्टम मा पानी साधारण प्रकोप spells.
चिन्ता को एक विशेष सेट ठंडा-प्रभुत्व जलवायु लागि खडा. छत वातानुकूलन बचत गर्न योगदान र अन्य प्रमुख मुद्दाहरू सम्बोधन गर्छ? यो कुल ऊर्जा कार्यक्रम को भाग हो? त्यहाँ शहरी गर्मी द्वीप बारेमा बढ्दै चासो छ. चिन्तनशील, सेतो छतहरुको केही कारण ती क्षेत्रमा चासो भएका छन्. तिनीहरूले भवन कूलर राख्न, वातानुकूलन लागत कम गर्न र पनि वरपरका वातावरण को गर्मी-लोड कम.
2. छत सिस्टम चयन कुन भौतिक र अन्य तत्व प्रभावित?
एक सुविधा को लक्ष्य र मिशन पहिचान पछि, यो भवन नै मूल्याङ्कन गर्न समय.
जब यो छत प्रतिस्थापन गर्न आउँछ, तपाईं छत क्षेत्र नै विशेषताहरु सूची आवश्यक. यो छत गरेको आकार विस्तार गर्न सबै भन्दा राम्रो छ, आकार, ढलान, डेक निर्माण, किनारा विवरण, protrusions, छत पहुँच र अवस्थित पाटन सिस्टम. यो आधारभूत जानकारी सहित, तपाईं मूल छत किन अब पर्याप्त छ पत्ता लगाउन आवश्यक.
3. लचिलो-झिल्ली छत विकल्प के उपलब्ध छन्?
थर्माप्लास्टिक झिल्ली प्लास्टिक पलिमर आधारित छन्.
सबैभन्दा TPO झिल्ली पलिएस्टर संग प्रबलित छन्, फाइबर सिसा वा दुई संयोजन, तर unreinforced TPO झिल्ली उपलब्ध छन्.
संशोधित कोलतार झिल्ली निर्माण-अप छत प्रयोग परम्परागत स्थापना प्रविधी केही लचिलो-झिल्ली छत को निरूपण र prefabrication लाभ समावेश. संशोधित कोलतार पानाहरू कारखाना-निर्मित हो, डामर बनेको जो परिमार्जन छ वृद्धि लचकता लागि एक रबर वा प्लास्टिक बहुलक संग, र थप बल र स्थिरता लागि एक सुदृढीकरण संग संयुक्त.
4. झिल्ली र संलग्न सिस्टम को कुन प्रकार भवन लागि सबै भन्दा राम्रो हो?
धेरै कारक एक विशेष भवन लागि सबै भन्दा राम्रो प्रणाली निर्धारण. सबैभन्दा भवन लागि, त्यहाँ विकल्प र आवश्यकता लाभ को एक नम्बर सुविधा गरेको मिशन बयान विरुद्ध वजन गर्न छन्. निर्णय गर्न गर्नुपर्छ मात्र लागत को आधारमा. झिल्ली अन्य महत्त्वपूर्ण विचार उचाइ निर्माण गर्दै, हावा जोखिम, पूर्वानुमानित छत यातायात र सौंदर्य.
सजिलै फास्टनरों स्वीकार कि एक स्टील वा काठ डेक एक mechanically fastened झिल्ली लागि राम्रो सब्सट्रेट बनाउँछ.
भवन सौंदर्य चिन्तित ती लागि, रंग झिल्ली निर्माण गरेको उपस्थिति एउटा आकर्षक योगदान गर्न सक्छन्.
5. काम साइट वितरित सबै छत सामाग्री उल लेबल सहन गर्छ?
यसबाहेक, छत विधानसभा तपाईँले किन्न वा निर्दिष्ट पक्का हुन, जो इन्सुलेशन समावेश, छ उल-वर्गीकृत र -labeled.
बनाउन तपाईं रही उत्पादन परीक्षण गरिएको थियो कि वास्तविक उत्पादन पक्का. के तपाईं पनि त्यस्तै तर बराबर छैन भन्ने कुरा चाहँदैनन्. काम साइट मा लेबल लागि हेर र निश्चित प्रणाली सबै घटक सँगै जाँच बनाउन. के तपाईं आफ्नो भवन मा प्रयोग गर्दै कि इन्सुलेशन संग परीक्षण गर्ने झिल्ली चाहनुहुन्छ.
6. प्रणाली एक हावा उत्थान दर्जा आवश्यक गर्छ?
हावा उत्थान क्षति व्यापक र महंगा हुन सक्छ. एक उद्योग मानक रूपमा स्वीकार, नागरिक ईन्जिनियर मानक को अमेरिकी समाज 7-95, “भवनहरु र अन्य संरचनाहरु लागि न्यूनतम डिजाइन लोड,” निर्माण को हावा क्षेत्र निर्धारण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ. हावा उत्थान परीक्षण, कि कारखाना म्युचुअल वा Underwriters प्रयोगशालाओं मा प्रदर्शन जस्तै, चयन गरिएको छत सिस्टम पूरा वा स्थानीय हावा उत्थान आवश्यकताहरु नाघ्यो कि निर्धारण गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ.
7. पुरा सिस्टम छत संरचना को मृत्यु लोड वजन थप्न गर्छ कति?
कुनै पनि reroofing विकल्प छान्ने, सुविधा कार्यकारी निश्चित सही लचिलो-झिल्ली विकल्प रोजेको छ बनाउन छत डेक को लोड-असर क्षमता सजग हुनुपर्छ. नयाँ निर्माण मा, संरचनात्मक इस्पात बचत अक्सर लाइटर लचिलो-झिल्ली प्रणाली को एक स्थापना गरेर हासिल गर्न सकिन्छ.
एक ballasted थर्माप्लास्टिक वा EPDM छत अधिक आवश्यक हुन सक्छ 1,000 प्रति पाउण्ड 100 वर्ग फिट, जबकि एक mechanically संलग्न वा पूर्णतया पालन thermoset वा थर्माप्लास्टिक झिल्ली वजन 33 प्रति पाउण्ड 100 वर्ग फिट.
8. छत ठेकेदार को विशेषज्ञता र वित्तीय तागत तपाईं विचार गर्दै छन् के-के हुन्?
छत ठेकेदार ठूलो हेरविचार संग चुनिएको गर्न आवश्यक. विगतमा भित्र नयाँ माल छत र आवेदन प्रविधी को परिचय 10 वर्ष धेरै परिवर्तनहरू गर्न नेतृत्व छ. एउटा व्यावसायिक छाना ठेकेदार छत प्रणाली विभिन्न प्रकारका परिचित हुनुपर्छ, तपाईं आफ्नो सुविधा लागि सबै भन्दा राम्रो निर्णय गर्न मद्दत गर्न, आफ्नो बजेट मा आधारित.
ती coverages आफ्नो छत काम अवधिको लागि प्रभाव हो कि जाँच.
विभिन्न छत प्रणाली को स्थापना एकदम भिन्न हुन्छ. शिक्षा र तालिम छत प्रणाली को स्थापना मा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तत्व हो. निश्चित छत ठेकेदार तपाईँले चयन स्थापित भइरहेको प्रणाली मा विस्तृत र निरन्तर प्रशिक्षण थियो.
राष्ट्रिय छत ठेकेदार संघ एक पेशेवर छत चयन पुस्तिका प्रदान गर्दछ. साथै, धेरै निर्माताहरु roofers अनुमोदन अघि पूरा गर्नु पर्छ भनेर विशेष योग्यता संग ठेकेदार कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ.
9. के warranted र जसलाई द्वारा छ?
त्यहाँ छत वारंटी को दुई आधारभूत विभाग छन्. यो ठेकेदार गरेको ग्यारेन्टी सामान्यतया कारीगरी समेट्छ. उत्पादकको ग्यारेन्टी कम से कम सामाग्री समेट्छ, धेरै आवरण अतिरिक्त आइटम हुनत. पनि यदि निर्माताको ग्यारेन्टी व्यापक छ, छत अनुचित स्थापना भएको छ भने यो पूर्ण सुरक्षा छैन.
ध्यानपूर्वक पढ्नुहोस् र प्रस्ताव कुनै पनि छत ग्यारेन्टी बुझ्न र यसलाई शून्य भनेर प्रावधान लागि हेर्न. जस्तै, यो सबै ponded पानी जोगिन लगभग असम्भव छ. Ponded पानी समर्थन स्तम्भहरू बीच मा छत डेक को एक भरा छत नाली वा विक्षेपन कारण हुन सक्छ. वारंटी मान्य रहन्छ आश्वस्त उचित छत मर्मत मदत गर्न सक्छ. को ग्यारेन्टी voids भनेर ग्यारेन्टी भाषा सजग हुन.
छत सिस्टम को एक विस्तृत दृश्य परीक्षा को एक विशिष्ट मर्मतका कार्यक्रम हुन्छन्, चमकता, इन्सुलेशन र सम्बन्धित घटक कुनै पनि सम्भावित समस्या क्षेत्रमा पहिचान गर्न.
10. पछि छत स्थापित छ, के पछि सेवा र शैक्षिक कार्यक्रम सुविधा व्यवस्थापन टीम लागि उपलब्ध छन्?
विशिष्ट पाठ्यक्रम निर्माण मालिक र सुविधाहरु प्रबन्धकहरू विभिन्न छत प्रणाली बारेमा थप जान्न मद्दत गर्न उपलब्ध छन्, माल र घटक; इन्सुलेशन र सहायक उत्पादनहरु; छत डिजाइन को तत्व; ठेकेदार चयन; वारंटी र मर्मतका विचार.
अनुच्छेद स्रोत: http://EzineArticles.com/expert/Julian_Arhire/94516
अनुच्छेद स्रोत: http://EzineArticles.com/6336340
डेट्रोइट छत सेवाE-mail: detroit.info@roofingrepair-service.comTel:3133324858Social:https://www.facebook.com/detroitroofingservice/
18312 Woodingham Dr, डेट्रोइट, एमआई 48221
Call (313) 332-4858 Detroit Roofing Service for your free estimate. We provide roofing all roofing services for the Detroit, Michigan Metro Area from new roof installation, metal roofs, roofing repair, tile, shingle or flat roof, gutter installs, etc... यो साझेदारी:ट्विटर मा साझेदारी गर्न क्लिक (नयाँ सञ्झ्यालमा खुल्छ)Click to share on Facebook (नयाँ सञ्झ्यालमा खुल्छ)Google+ मा साझेदारी गर्न क्लिक (नयाँ सञ्झ्यालमा खुल्छ)
Posted in UncategorizedTagged आननअर्बोर छत, Auburn छाना ठेकेदार, मिशिगन मा सबै भन्दा राम्रो छत कम्पनी, क्रिश्चियन डेट्रोइट छत, मिशिगन मा व्यावसायिक छत कम्पनीहरु, व्यावसायिक छत मिशिगन, डियरबोर्न छत, डेट्रोइट घर सुधार, डेट्रोइट नवीकरण, डेट्रोइट छत मर्मत, डेट्रोइट roofers, डेट्रोइट छत, डेट्रोइट छत कम्पनीहरु, डेट्रोइट छत कम्पनी, चकमक छत, कालामाजो छत, Lansing छत, मेट्रो डेट्रोइट छत, मिशिगन roofers, मिशिगन छत, मिशिगन छत कोड, मिशिगन छत कम्पनीहरु, मिशिगन छत ठेकेदार, पोर्टयुरोन छत, मिशिगन मा छत कम्पनीहरु, छत मर्मत आननअर्बोर, छत मर्मत डेट्रोइट, मिशिगन मा roofers, पाटन आननअर्बोर, मिशिगन मा पाटन कम्पनीहरु, पाटन कम्पनीहरु मिशिगन, पाटन कम्पनी मिशिगन, छत ठेकेदार डेट्रोइट, मिशिगन मा छत ठेकेदार, छत ठेकेदार मिशिगन, पाटन डेट्रोइट, मिशिगन मा छत, मिशिगन मा पाटन जब, पाटन मिशिगन, रोजभिले छत, वारेन छत	पोस्ट नेविगेशन
← छत मर्मत कसरी पाउन? डेट्रोइट, एमआईRoofing Contractors Detroit Michigan→	Add your own widgets here	विषय: Dustland एक्सप्रेस द्वारा Kaira